မွေးစားစကားလုံးများ - ဝီကီပီးဒီးယား
မွေးစားစကားလုံးဟူသည် ဘာသာစကားတစ်ခု၏ ပင်ရင်းစကားလုံး မဟုတ်သည့် အခြားဘာသာစကားမှ စကားလုံးကို တိုက်ရိုက်အသံဖလှယ်၍ ယူသုံးသော စကားလုံးဖြစ်သည်။ ဤ အကြောင်းအရာတွင် မြန်မာဘာသာ စကား အတွင်း အသုံးပြုနေသော မြန်မာစကားပင်ရင်းမဟုတ်သည့် အခြားဘာသာစကားမှ ဆင်းသက်လာသော မွေးစားစကားလုံးများကို စာရင်းပြုစုဖော်ပြပါမည်။
ဒါရိုက်တာ Director တာဝါ Tower
မဂ္ဂဇင်း Magazine ဘောလုံး Football
ကောလိပ် College ဘောလီဘော Volleyball
ကင်မရာ Camera ဘက်စကတ်ဘော Basketball
ကွန်ပျူတာ Computer ကိတ် Cake
ကလစ် Clip ကုမ္ပဏီ Company
ရေဒီယို Radio မီတာ Meter
ဘောလ်ပင် Ball Pen
ပေါက်စီ 包子 (bāozi)
မြူစွမ် 面线 (miàn xiàn)
လန်ချား 人力车 (rénlìchē)
ထော်လာဂျီ 拖拉机 (tuōlājī)
တို့ဟူး 豆腐 (dòufu)
ဒင်းဆမ်း 点心 (diǎnxīn)
အီကြာကွေး (You char kway)
တိုရှည် Dosai (Dosa)
စမူဆာ samosa (समोसा)
အလံ alam A
ငံပြာရည် namplah B နာမ် ဗ္ဗလဟ် D
ခေါက်ဆွဲ ကောဝ်စော်အေး E
နနွင်းမကင်း ကနောဝ်မ် မော်ဝ်ကင် F
မုံ့လက်ဆောင်း လောက်ဆောင် G
ကောက်လမ်ကျည်တောက် (ခဲတံချောင်း) ကောဝ်လမ် H
ကာရာအိုကေ カラオケ (kaɽaoꜜke)
နာနတ် nanas[<span title="Some source stated that word come from French or German ananas.">ကိုးကားချက်လိုသည်] C
A.^ The Burmese word for flag,alan (အလံ) comes from Arabic alam. This one was shocking to me, because Arabic seems likeavery unlikely language to have influenced Burmese. But I was mistaken, because Arab traders first made contact with Burma during the 1400s and their ships probably carried flags,aterm not present in the Burmese language at the time.
B.^ The Burmese word for fish sauce, ngan bya yay (ငံပြာရည်) comes from Thai namplah. I always thought the ngan in ngan bya yay means “salty” (because salty is ‘ngan’ in Burmese), but I found out today, for the first time, they’re spelled differently in Burmese.
C.^ The Burmese word for pineapple, na nat thi (နာနတ်သီး) comes from French ananas. The French were not as intimately tied in Burmese history as the British, but they apparently did make come cultural contributions. I’m assuming that the French either traded pineapples or introduced pineapple cultivation in Burma during the late 1800s (according to the Burmese government website). 
D.^ ပုဇွန် သို့မဟုတ် ငါး−ငါးပိ၏ အဆီအနှစ်။
E.^ အမျှင်ဖြတ်ထားသော ဆန်။
F.^ ချိုမြိန်သော အရသာပါသည့် ဟင်းလျာ။ ယင်းဟင်းအိုးကို အပြင်ဘက်မှ ထောင့်တန်းမျဉ်းများ သားထားသည်။
G.^ ခေါက်ဆွဲကဲ့သို့ အုန်းနို့ချိုရည်နှင့် စားရသည့် ချိုမြိန်သော စားဘွယ်။
H.^ မီးကင်၍ ကျည်တောက်တွင်း ထည့်ထားသော အုန်းနို့နယ်ထားသည့် ကောက်ညှင်း။ 
↑ Interesting Burmese word origins – Fifty Viss
↑ ဦးဖေမောင်တင် (၁၉၇၄၊ ဒုတိယ အကြိမ်။)။ ယိုးဒယားပြည်မှ ရရှိသော ယဉ်ကျေးမှုများ။ နဝရတ် ကိုးသွယ်၊ ယဉ်ကျေးမှုစာဆောင်၊ အတွဲ၄၊ အမှတ်၂၊ ၁၉၆၃ခု။ စပယ်ဦးစာပေ။ |year= ရှိ ရက်စွဲတန်ဖိုး စစ်ဆေးရန် (အကူအညီ)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မွေးစားစကားလုံးများ&oldid=645636" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၄၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။